Bulsho News » Mauritania oo dumarka cayilan laga jecel yahay iyo goobo loo furay si gabdhaha loogu cayiliyo
Dhaqan dunidii kale ee maqashay ay ka yaabtay, dalkaasina ka jira ayaa ah in gabdhah da’doodu jirto 5-9 loo diro goobo loogu tala galay cayilinta, halkasi oo lagu siiyo cuntaba tay ka dufan badan tahay, iyadoo la raacayo jadwal.
Laba kilo oo midho khaas ah oo lagu cayilo ah, lana shiiday ayaa lagu daraa laba koob oo subag ah iyo 20 litir oo caano geel ah, intaas oo inta la isku qaso ay tahay cunugto maalin gudaheed ku dhamaysato, iyadoo waliba waxii ay soo mantagto ay tahay in ay dib ka qalayso oo cabto.
Qiyaasta intaa la eg ayaa 8 jeer ku laban jibaarmaysa nafaqada iyo dufanka qof wayni u baahan yahay maalinkii. Asluub ay ka mid yahiin garaacid iyo in waliba gabadha laga dhaadhiciyo in masutaqbalkeedu ku xiran yahay cayil iyo xalus ayay adeegsadaan dumara goobahan maamula, oo caruurta loo keeno.
Sida caadiga ah gabadhu markay jirto 12 waa in miisaankeedu kor u dhaafo 80 kg, halka ay ku gaadho 15 sanana waa in ay u muuqataa 30 jir xaga jira iyo hilibka.
Waxii nool baa ku nooleeya
Mint Elly oo ah haweenay u dhaq dhaqaaqda xaquuqda dumarka ayaa sheegtay in ujeedida laga leeyahay cayilinta gabdhahu tahay sidii ay usoo jiidan lahaayeen raga guurdoonka ah.
Dhanka kale haweenka dalkaasi ayaa aaminsan in qofta dumarka ahi inta ay jir ahaan u wayn tahay ay qalbiga ninka ku wayntahay, taasoo keenta in xataa kuwa la qabo ay si xad dhaaf ah isu cayiliyaan si aan qalbiga ninkeedu u raacin tu kale oo iyada ka buuran.
Gabadha oo inta u dhaxaysa garabka iyo suxulka uu hilibku laad laado ( Suxul baruur) ayaa ah wax dumarku ku faanaan, raguna marka u horaysa ay haweenayda arkaanba isha ku dhuftaan. Raga laftiisa ayaa quruxda u yaqaan buuran, taas oo iyana qayb ka ah arimaha caadadan yaabka leh dhidibada usii aasay.
Xagee dhaqankani ka yimid?
Caadadan oo loo tirinayaa in ay bilaabatay waqtigii isticmaarka ka hor, iyadoo haweenka ay qabaan raga maalka leh ay guriga keensan jireen jaariyado howsha u qabta, halka iyagu ay fadhi iyo cunto isku darsan jireen, taas oo keentay in ay cayilaan, arintaas oo aakhirkii keentay in cayilku noqdo calaamad hodantinimo, caatanimadana mid gaajo iyo faqri.
Fikirka ah in quruxda dumarka lala xariiriyo hadba say u buuran tahay ayaa dunida qaybteeda faqriga ah caadi ka ahaa mar aan sii fogayn, iyadoo cayilka daliil looga dhigay in gabadhu guri ladan kasoo toostay, soomaalida qaarkeedna waxayba isticmaali jireen erayo ay ka mid yahiin: Waa qof jir ah, suxul baruur, kun laba kun iwm.
Inkasta oo caadaadaasi si aada ugu baahsan tahay Mauritania, hadana waxaa jira is badal muuqda oo ku dhacay habkii markii hore loo fakari jiray, iyadoo aalada casirga ah ee TV-ga iyo internetku ay keeneen in si kale dumarku fakaraan, qaarkoodna bilaabeen in ay is caateeyaan.
Dhanka kale dhaqaatiirta dalka ayaa qaylo dhaan kasoo saaray arinta cayilka, iyagoo sheegay in cayilku aabo iyo hooyaba u yahay xanuun oo dhan, taasoo iyana qayb ka qaadatay habkii bulshadu u fakari jirtay.